श्रीमानले श्रीमतीको लागि बनाए प्याजको गुलदस्ता, नयाँ वर्षमा दिनेछन् उपहार
पुष १५, २०७६, मंगलबार
नयाँ वर्षमा मानिसहरू आफ्ना प्रियजनहरूलाई उपहार दिने तयारी गर्दैछन् । यस्तै कानपुरका एक व्यक्तिले नयाँ वर्षमा आफ्नी श्रीमतीका लागि अनौठो सरप्राइज उपहार तयार गरेका छन् । वास्तवमा, सञ्जय तिवारी नाम गरेका यस श्रीमानले प्याजको गुल...
ढाडमा पलाउँदै थियो सीङ, जब जाँच गरियो डाक्टरहरूकाे उड्यो होस
विदेशमा एक व्यक्तिको ढाडमा पलाउँदै गरेको गाँठोलाई बेवास्ता गर्न धेरै महँगो पर्न गएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा त्यो गाँठोको आकार यति ठूलो भयो कि उनलाइ त्यो आफ्नो ढाडमा जनावरको सिङ जस्तो लाग्न थाल्यो । ५० वर्षे ती मानिसलाई जब गाँठोल...
एक मोस्ट वान्टेड 'बाबा' जसले निर्माण गर्दै छन् एउटा नयाँ देश !
भारत । थाहा छैन तपाईँहरूले अहिले सम्म कस्ता कस्ता बाबाको कथा सुन्नु र हेर्नु भएको छ । तर बाबाले गरेको कामको अरु कुनै उदाहरण छैन । जब देशका प्रहरीले बाबाको पीछा गरे, बाबाले सिधै नयाँ देश किनिदिए । यो...
जब एक महिलाले १०० विवाहित पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखिन...
एक महिला भन्छिन् कि उनका लगभग १०० विवाहित पुरुषहरूसँग सम्बन्ध थियो । मिरर.कम.को.यूके रिपोर्टका अनुसार लन्डनमा बस्ने ४७ वर्षीया महिला ग्वेनीथ लीले यति धेरै सम्बन्धका लागि आफ्नो 'चीटिङ् जीन' लाई दोष दिएकी छिन् । ग्वेनी...
अनमोल प्रस्ताव: प्रेमिकाले प्रेमीलाई दिइन घर र बीएमडब्ल्यू
आज सम्म, तपाईले सुन्नु भएको हाेला कि प्रेमकाे लागि अथवा विवाहकाे प्रस्ताव राख्दा केटाहरूले आफ्नाे प्रेमिकालाई उपहार दिन्छन् । तर, एक चिनियाँ केटीले आफ्नो प्रेमीलाई प्रस्ताव राख्दा यति महँगो उपहार दिइन कि उनी सोशल मिडियामा भाइरल भइन् ...
क्रिशमशका लागि सजाइएको रुख सर्पले बेरेपछि...
काठमाडाैं । अस्ट्रेलियाको मेलबर्नको व्यस्त सडकमा क्रिशमशका लागि सजाइएको रुखमा अस्वभाविक दृश्य देखिएको छ । जहाँ तीन खतरनाक सर्पले सजावट भएको ठाउलाई बेरेका थिए । यो दृश्य मंगलबार फेसबुकमा पोष्ट गरिएको थियो । यसको क्याप्सनमा लेखिएको ...
अनाैठाे ठाँउ,आफूले चाहे जति धेरै श्रीमान छनौट गर्न सक्छन् महिला
त्यहाँ पुरुषहरूको सौन्दर्यको एक प्रतिस्पर्धा हुन्छ । महिला न्यायाधीश हुन्छिन् । सब भन्दा आकर्षक जो मानिस साबित हुन्छ त्यो संग चाहेपछि महिला न्यायाधीश पनि सुत्न सक्छिन् । यदि चाहेपछि उनलाई आफ्नाे श्रीमान पनि बनाउन सक्छिन् । यदि महिला न्यायाध...
विश्वकाे सबैभन्दा महँगो चिया,यति मुल्यमा १० वटा फ्ल्याट किन्न सकिन्छ
चियालाई विश्वकाे सबैभन्दा प्रसिद्ध पिउने पदार्थहरूमा गणना गरिन्छ । अतिथिहरूको स्वागत वा साथीहरूको गफ, चियाको कप बिना सबै कुरा अधुराे देखिन्छ । सामान्यतया व्यक्तिले केवल एक वा दुई प्रकारको चियाको अध्यन गरेका छन् । जबकि विश्वभरि मा चि...
खुसी हुन सँगै बस्ने कुरा अब पुरानो भयाे । एउटा अध्ययनबाट पत्ता लागेकाे छ कि जुन जोडी कामको सिलसिलामा एक अर्काबाट टाढा रहन्छन् तिनीहरू एक अर्कालाई बढी माया गर्छन् । र तिनीहरू बीच सधैं नजिकको सम्बन्ध हुन्छ। धेरै दिन पछि एक अर्क...
विश्वभरि यस्ता थुप्रै हीरा खानीहरू छन् । जहाँ बाट सयौं हीरा निकालेका छन् जसका कारण कैयाैँ हीरा कम्पनीहरू धेरै धनी भएका छन्। तपाई चकित हुनुहुनेछ कि विश्वमा एउटा यस्तो हीरा खानी छ, जहाँ कुनै पनि साधारण व्यक्तिले हिरा खोज्न सक्छ। यहा...
यो संसार रहस्यले भरिएको छ। मानिसहरूले केहि रहस्यहरू सुल्झाउन सफल भएका छन् । तर आज पनि संसारमा यस्ता धेरै रहस्यहरू छन्, जुन समाधान गर्न लगभग असम्भव छन् । त्यस्तै एउटा रहस्य २४० पृष्ठको पुस्तक हो । भनिन्छ कि यो पुस्तक आजसम्म कसैले प...
तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्नेछ, तर यो धेरै छिटाे नै चर्चामा आइरहेको छ कि एक मान्छेको पादबाट लामखुट्टे मर्न सक्छ । युगान्डाका एक व्यक्ति यस्ता छन जसकाे विषालु ग्यासमा यति शक्ति छ कि लामखुट्टे पनि यसको कारणले मर्दछन् । अविश्...
याे मामिला सर्बिया बेलग्रेडकाे एक व्यक्तिको हो जुन जन्मियो तर अण्डकोष थिएन । अन्तमा उनका जुम्ल्याहा भाइ काम आए । जसले भाइलाई आफ्नो एउटा अण्डकोष दिए । ३६ वर्षीय ति मानिससँग जन्मदानै अण्डकोष थिएन । सुरुमा त उनलाइ कुनै समस्या ...
एक व्यक्तिले 85 लाख रूपैयाँ भन्दा बढीको केरा खाएका छन् । उक्त केरा अमेरिकामा एक कला कार्यक्रममा प्रदर्शित गरिएकाे थियो । केरा भित्तामा टेपको माध्यमले टाँसियोकाे थियाे। तरपनि , केरा खाने घटना पछि कुनै विवाद भएको थिएन । यो केरा...
दूध भन्दा बढी बियर पिउनु फाइदाजनक छ, (PETA) पेटा(पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल)को दाबीबाट मानिसहरू चकित भए । रक्सी वा बियर पिउनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो छैन। शायद यसैले हामीलाई बाल्यकालदेखि दूध पिउने फाइदाहरूको बारेमा बता...
एजेन्सी । एक २० वर्षीय महिलाका ४ जना प्रेमी (पति)सँग बस्दै आएकी छिन्। अहिले गर्भवती भएकी महिलाले ५ जना (४ प्रेमी र आफूसहित) बच्चाको हेरचाह गर्ने बताएकी छिन्। यो समाचार अमेरिकाको फ्लोरिडा भन्ने स्थानको हो। द सनको रिर्पोट अन...
दक्षिण कोरियामा महिलाहरुले किन विवाह गर्न छाडे ?
काठमाडौँ । बागलुङको पोखराचौरमा पिकअप दुर्घटना हुँदा ११ जना घाइते भएका छन । बरेङ गाउँपालिका-२ बराहाकोटबाट बरेङ बजार जाँदै गरेको ध १ ज १८३ नम्बरको गाडी बरेङ गाउँपालिका-२ पोखराचौरमा आज बिहान साढे ८ बजे दुर्घटना भएको हाे ।&n...
काठमाडाैं । ग्याब्रियल रिज १८ वर्षकी मात्र भइन्। बिहेका लागि उनको उमेर पुग्यो। उनका अभिभावकलाई १८ वर्ष पुग्नुअघि नै भनेकी थिइन्, ‘म चाहिँ बूढो उमेरको व्यक्तिसँग मात्र बिहे गर्छु। तपाईंले आपत्ति जनाउन पाउनु हुन्न।’ अब रिज...
२ फिट बेहुला र ६ फिट बेहुलीकाे यसरी भयाे प्रेम विवाह
काठमाडाैं । जीवनमा हरेक मानिसले कसै न कसैको साथ खोजिरहेकै हुन्छन् । अधिकांश युवायुवतीले आफ्नो साथी आफूसँग जोडी मिल्ने होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, यस्तो सोचाईलाई तोड्दै एकजना ६ फिट अग्ली युवतीले २ फिट अग्ला एक पाकिस्तानी युवकसँग बिहे...
जसले कुमारी किशोरी नग्न नचाउँछन् पछि पत्नी बनाउँछन्
काठमाडाैं । अफ्रिकी देश स्वाजिल्याण्डका राजा मस्वाती तृतीय आफ्ना १५ जना पत्नीसँग सगोलमा बस्छन् । ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिका मालिक उनले आफ्ना पत्नीहरूलाई उपहार दिनका लागि उनले झण्डै २ अर्ब रुपैयाँबराबरका लग्जरी कार खरिद गरेका छ...